Hutano | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Mafuta "Levomekol" panguva yekuzvitakura
Nekutorwa kwehunhu hutsva hwemukadzi ane nhumbu, mumiriri wevasina kusimba pabonde ari kudzokorora mararamiro ake. Nekudaro, vanamai vazhinji vanotarisira vanotanga kunyatsoongorora hutano hwavo uye hutano. Nekudaro, se ...
Magetsi fodya "Mapani": mirairo yekushandisa, maitiro, ongororo
Vazhinji vanoputa, vachida kuita kuti tsika yavo ive yakachengeteka sezvinobvira ivo pachavo nevamwe, vobva vatendeukira kumidziyo yemagetsi ekufambisa. Nhasi, nzira iyi isinganyanyo kujairika iri kuramba ichiwedzera. Great ...
Ndekupi kwekutsvaga kurapwa kwebasa? Misiyano pakati pemakiriniki eruzhinji uye akazvimirira
Nhasi, vazhinji havazivi kwavanowana kwekuongororwa kwachiremba kwebasa. Muchokwadi, pane maviri chete akakodzera sarudzo: makiriniki ehurumende uye akazvimirira nzvimbo dzekurapa. Nezve makiriniki ehurumende Ivo vese ...
Misumbu yekumusoro yakadzika yemunhu: chimiro, mabasa
Makumbo ezasi makumbo (makumbo) anotakura mutoro wakakura kwazvo. Mabasa avo anosanganisira kupa kufamba uye kutsigirwa. Iyo mhasuru yemigumo yakadzika, iyo anatomy yayo iyo icharondedzerwa zvakadzama mune chinyorwa, inoonekwa seiyo yakanyanya simba ...
Mushonga "Raunatin": chii chinobatsira? Tsananguro yezvivakwa uye kuumbwa
Kazhinji, vanachiremba, mushure mekuongororwa, vanopa iyo Raunatin mushonga kune varwere. Chii chinobatsira mushonga uye chii chinosanganisirwa mukuumbwa kwawo? Muzviitiko zvipi zvinodiwa kutora mapiritsi uye unogona kurapa ...
Hutano hwepedyo: inokonzera kubuda ropa pakati pekuenda kumwedzi
Muviri wechikadzi unonakidza kwazvo uye zvakaoma. Nekuda kwehomoni yekumashure, shanduko yemwedzi nemwedzi inoitika mairi. Iko kugadzikana kwemasekisite zvisina kunongedzera hutano hwepakanaka bonde. Asi kazhinji vakadzi vanofanirwa kutendeukira ku ...
Yakatungamirwa tomography yemusoro: wongororo pamusoro pemaitiro
Hazviwanzo kuitika kuti uongororwe uchitsamira pakunyunyuta kwemurwere uri wega, kunyanya kana matambudziko akacherechedzwa pachikamu cheuyo mutsipa. Kuti udzidze mamiriro ayo inobvumira computed tomography (tomogram) yemusoro. Iyi ndeimwe ye ...
Immunological ropa test (immunogram): zviratidzo, zviratidzo zvekuita, decoding
Kuongororwa kweropa risingabvumirwe inzira inoshandiswa nehunyanzvi mumunda wekurapa kuona murwere kugona kwemaitiro ekudzivirira zvakakomba hutachiona uye hutachiona. Diagnostic mhedzisiro inoratidza huwandu hwekudzivirira kwekudzivirira, kuongorora kunaka uye ...
Exercise kurapa: kurovedzera kune hernia ye cervical spine. Chii chinofanira kunge iri yekurovedza muviri nehezi remuchibereko?
Cervical hernia ndiyo imwe yenjodzi dzinonzi pathologies dzinokonzerwa nehuremu hwakaringana husingaenzaniswi mutoro pamusoro pemuviri. Zviratidzo zvechirwere ichi muvarwere vese zvakada kufanana. Munhu anotanga kunzwa kurwadziwa mutsipa, musoro ...
Anticholinergics: rondedzero. Iyo yekumhanyisa chiito cheanticholinergic drug
Mishonga yeAnticholinergic zvinodhaka zvinodzivirira kuita kweasvikiki, acetylcholine, pane cholinergic receptors. Mune zvinyorwa zvekunze, boka iri rezvinhu zvekurapa rinodaidzwa kuti "delirium" nekuda kwekugona kukonzera Delirium ...
Mushonga "Resorcinol": mirairo yekushandiswa
Ndeapi maitiro ekurapa eResorcinol? Mirayiridzo yekushandiswa, mapikicha uye maficha emushonga uyu anopiwa pazasi. Kuumbwa, mafomu akagadzirwa Chii chinonzi resorcinol? Mirayiridzo yekushandiswa inoti chinhu ichi ...
Chii chinonzi hypertensive encephalopathy? Zvinokonzera, Zviratidzo, Kurapa
Brain ischemia, maronda, kurohwa kwemoyo uye encephalopathies zvinotariswa sehurwere zvakanyanya. Kazhinji vanouraya. Pakati pehuwandu hukuru hwehuropi pathologies, encephalopathy inofanirwa kutarisisa. Iri iboka rakakura rezvirwere. Ivo vane hunhu ne ...
Obninsk, Kudzorera nzvimbo: Rondedzero, nyanzvi, mabasa uye ongororo
Hutano hwevanhu huchagara huri munzvimbo yekutanga. Mazuva ano, vazhinji vane fungidziro yekuti mushonga wenyika wakaburitsa nguva yawo. Varwere vakadai vanofarira kuenda kune vega vezvokurapa mas ...
Mushonga "Biltricid": analogues, mirairo uye ongorora nezvekurapwa
Helminthiasis ine njodzi uye, zvinosuruvarisa, iri dambudziko rakajairika, iro mukushaikwa kwekurapa kunogona kutungamira kumatambudziko. Mushonga, hongu, unopa zvishandiso zvinokwanisa kuchenesa muviri wemarara. Mumwe wavo ...
Senna muti wemakwenzi ane zvakawanda zvinobatsira zvivakwa.
Iyo mishonga yemakwenzi Senna inoshandiswa mune mishonga yechivanhu senge mushonga wekupedza, pamwe nekubvisa pathologies, izvo zvinoda zvinyoro nyoro uye nyore kubvisa matumbu emarara. Inoreva ...
Zvekukurumidzira kutarisira kwebronchial asthma. Zvinodhaka zvechirume
Bronchial asthma chirwere chisingaperi chechirwere chinoratidzwa nekurwisa kwekufema kana kufema. Chirwere ichi chinoitika muvana nevakuru. Gore rega rega huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa iyi huri kukura ..
Dumbu rinobuda mudumbu rinofanira kubvunza chiremba wemamonologist.
Wazviona here kuti mvura iri kuburitswa kubva muchipfuva chako? Ndinofanira kutya here? Kana kuti pamwe izvi zvakajairika? Chiratidzo chechirwere chipi chingave chinobuda kubva muchipfuva? Zvese zvako ...
Ungatora sei mazambiringa emafuta. Izvo zvakanakira uye zvinokuvadza zvemafuta ezvibereko
Kwemamireniyumu anoverengeka, mazambiringa akwezva kutarisa kwevanhu. Anorimwa munzvimbo dzakasiyana dzepasi uye anonakidzwa narwo rudo rusingaperi. Zvakaoma kuwana chimwe chirimwa chinogona kuve chakakomberedzwa zvikuru munhetembo, ngano, nziyo ...
Chii change chiri chekushandira color eye?
Parizvino, mushonga uri kukura nekukurumidza zvikuru. Maitiro akamboita sezvisina musoro ava kunzi ndiwo maitiro. Semuenzaniso, vakadzi vanogona kuwedzera mazamu avo, miromo, kushandura chimiro chemhino yavo, nezvimwe Izvi ...
Mushonga "Progestogel" (gel) - kuumbwa, shandisa, wongororo
Mushonga "Progestogel" (gel) wakazviratidza semushonga we mastodynia, mastopathy uye zvimwe zvirwere zve mammary gland. Mune mushonga, chishandiso ichi chinoshandiswa zvese zviri zviviri sedhiza guru, uye mune ...
peji 1 peji 2 ... peji 218 Next Page
Mibvunzo ye20 mu database yakagadzirwa mu 0,625 masekondi.